Ryanair Foundation ho an'ny vondrona Pilot Transnational
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ryanair Foundation ho an'ny vondrona Pilot Transnational
Ny mpanamory fiaramanidina Ryanair dia manohy manoratra tantara - amin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny fanohanana sy eo ambany fandrindrana ny fikambanana mpanamory fiaramanidina manerana an'i Eropa. Fifanarahana iray vaovao, manangana ny Ryanair Transnational Pilot Group (RTPG), no niraisan'ny rehetra tamin'ny 17 martsa, nandritra ny fivorian'ny ECA tao Luxembourg.
Miaraka amin'ity fikambanan'ny mpanamory fiaramanidina vaovao ity sy ny Conseil an'ny orinasa Ryanair dia miara-miasa mba hahatratra ny tanjon'izy ireo, toy ny: fifanarahana asa maharitra mivantana arakaraka ny lalàna eo an-toerana, ny asa mitovy sy mangarahara amin'ny asa aman-draharaha manerana ny tamba-jotra, ary ny solontena iraisana mahomby ho an'ireo mpanamory fiaramanidina Ryanair rehetra na iza na iza firenena. na fototra. Ny protokoleta koa dia mametraka ny RTPG ho toy ny vatan'ny mpanamory fiaramanidina Ryanair voalohany amin'ny raharaha transnational rehetra.
“Mijery ny mpanamory fiaramanidina Ryanair izao tontolo izao rehefa miezaka mafy izy ireo mba hanana toe-piainana mendrika sy ara-drariny. Ary marina izany! Ny asa atypical tsy azo antoka ary ny zon'ny mpiasa tsy nety dia tsy fironana amin'ny fiaramanidina fotsiny fa tranga iray izay miparitaka fatratra, na any Eropa na manerantany. Nasehon'ireo mpanamory fiaramanidina Ryanair fa amin'ny finiavana sy firaisan-kina lehibe dia afaka mamerina amin'ny toerany tsara ny asany eo amin'ny latabatra fifampiraharahana ireo mpiasa - vaovao tsara izany ”, hoy ny filohan'ny ECA, Dirk Polloczek.
Hatramin'ny krizy fanafoanana an'i Ryanair tamin'ny volana septambra 2017, nisy fandraisana andraikitra ifotony amin'ny fandaminana samirery niely nanerana an'i Eropa ary nitarika ny mpanamory fiaramanidina hanatevin-daharana ireo sendikan'ny mpivarotra maro an'isa. Nanangana ny filankevitry ny orinasa ofisialy izy ireo, natao hanamorana sy hametrahana ny fifampiraharahana mifanaraka amin'ny fepetra ara-dalàna sy ara-tsosialy. Sambany, ny mpanamory fiaramanidina Ryanair dia niteny malalaka momba ny ahiahin'izy ireo sy ny fitakiany. Ny fiatrehana ny fitantanan'izy ireo ho mpikambana ao amin'ny sendika - ary koa ny fandrahonana fitokonana any amin'ny firenena maro - dia nifarana tamin'ny telopolo taona ny fankahalan'ny seranam-piaramanidina
"Ny fanambarana ny fanekena ny sendika izay nanjohy an'i Ryanair dia tsy 'revolisiona', fa ilaina ela loatra ny fihainoana sy hiarahana amin'ireo mpanamory azy manokana izay tena manandanja tokoa ny fahombiazan'ny kaompaniam-pitaterana." hoy ny sekretera jeneralin'ny ECA Philip von Schöppenthau. “An'i Ryanair izao ny hanatevin-daharana ireo mpanamory fiaramanidina eny an-dàlana ary hahafantatra ny feon'izy ireo miaraka amin'ny olana iraisana iraisana sy olana iraisan'izy ireo. Ny fananganana an'ity vondrona mpanamory transnational ity dia famantarana mazava ho an'ny fitantanana Ryanair mba hanao dinika ara-tsosialy manorina sy misy heviny, eo amin'ny sehatra nasionaly sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny RTPG vaovao dia hamela ny Fikambanan'ny Mpikambana ECA manerana an'i Eropa sy ny Conseil an'ny orinasa Ryanair hanangona loharanom-pahalalana, fahalalàna ara-dalàna, politika ary teknika ary koa traikefa an-taonany maro amin'ny fifanakalozan-kevitra ara-tsosialy sy fifampiraharahana iraisana.
"Afaka manantena ny hiara-hiasa amin'ny RTPG izao ireo mpanamory Ryanair. Amin'ny famahana ny olan'izy ireo sy ireo zarain'izy ireo amin'ny mpampiasa azy ihany no ahafahany miantoka ny ho avy maharitra ho an'ny orinasa, ny mpandeha ary ny mpiasa, "hoy i Dirk Polloczek namarana.
Fizahan-tany vaovao ho an'ny mpizahatany sinoa ny fizahantany any Afrika
Tanànan'i Ho Chi Minh mankany Brisbane tsy mijanona amin'ny Vietjet